Iingcebiso ezi-5 zokwenza abantwana bakho bonwabe | Oomama Namhlanje
Iingcebiso ezi-5 zokwenza abantwana bakho bonwabe
UToñy Torres | 13/05/2021 20:00 | Iingcebiso
Into yokuba abantwana bonwabile yenye yezona zinto zixhalabisayo nawuphi na utata okanye umama. Ukubabona bekhula njengabantwana abonwabileyo, abancumayo, abakuqapheli ukubandezeleka kunye neengxaki zobomi, yinto ekhathaza wonke umntu ngendlela efanayo. Nangona kunjalo, kuhlala kulityalwa ukuba abantwana abonwabanga kuba, ulonwabo lwabo luxhomekeke ikakhulu kubomi bosapho.
Abantwana bonwabile ngento encinci, eyona nto bayifunayo kukuqwalaselwa, imidlalo, ukuziva bethandwa kwaye bonwabele ubuntwana babo. Kodwa nazo ziyafuna funda amaxabiso kwaye uphuhlise izakhono ezithile, kuba ekuhambeni kwexesha sisitshixo sokonwaba kwakho. Ukuba ukhathazekile ngokwenza abantwana bakho bonwabe, ungaphoswa ziingcebiso. Kungenxa yokuba unakho kwaye kufuneka ufunde ukuba ngumama okanye utata.
1 Indlela yokwenza abantwana bonwabe
1.1 Ezi ngcebiso ziya kukunceda wenze abantwana bakho bonwabe
Indlela yokwenza abantwana bonwabe
Ukuchaza umxholo wolonwabo kunokuba yinkohliso, ngakumbi xa ungaziva wonwabile ebomini bakho bemihla ngemihla. Kubantu abadala, ulonwabo luyelelene, lukhawuleze, kwaye lunqabile, kuba kwiimeko ezininzi iingxaki zigubungela amaxesha olonwabo. Ukufihla loo nkxalabo ayisositshixo, kuba abantwana babona ukuba into ayilunganga kwaye bayayibamba, nokuba abayazi ukuba yintoni.
Ukuba awonwabanga, ukuba awunakulonwabela ixesha elincinci kwaye ulibonise abantwana bakho, baya kuthi bakhulise isimilo esifana nesakho. Ubumsulwa obunomona babantwana, obubangela ukuba bakhuthazwe yiyo nantoni na, ebangela ukuba bothuke kwaye bonwabe, yile nto kufuneka igcinwe ngaphezu kwayo yonke enye into. Y akukho ndlela ibhetele yokwenza kunokuba ubancede bakhule, ukufunda ukusebenza ebomini kwaye kunjalo, ukufunda ukusingatha iimeko ezibi.
Ezi ngcebiso ziya kukunceda wenze abantwana bakho bonwabe
Khuthaza ukuzimela kwabo: Ukonwaba yimvakalelo eyenzeka ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, naxa injongo ifezekisiwe. Abantwana abazimeleyo bonwabile, kuba ngocelomngeni ngalunye olutsha abadibana nalo, bafikelela kwezi ntaba zibalulekileyo zolonwabo. Fundisa abantwana bakho pheka, nxiba, wenze imisebenzi eyahlukeneyo ekhaya okanye baqhube imisebenzi emincinci kubo.
Bayeke baveze iimvakalelo zabo: Ukuba uziva ngathi ukukhala, ukuthetha ngokungalawulekiyo, ukuhleka okanye ukuba baziva benomsindo kwaye bekhathazekile, mabavakalise nangayiphi na indlela abanokukwazi ngayo. Basenokungayazi kakuhle indlela yokuthetha ngeemvakalelo zabo, ke bafundise bonisa iimvakalelo zakho iya kubavumela ukuba bonwabe ngakumbi.
Phuhlisa ukuzithemba kwabantwana bakhoUthando lokuqala kufuneka luhlale lolo uziva lolo ngokwakho, sesona sifundo sisisiseko kwimfundo yabantwana. Yamkela wena, zixabise ngazo zonke izidima zakho kwaye ufunde ukusebenza ngeziphene zakho, ungaphezulu kwawo wonke umsebenzi osisiseko ekuzaleni. Ukungabikho kokuzithemba kungoyena nobangela weengxaki zeemvakalelo ezinokuba mandundu ngokuhamba kwexesha.
Chitha ixesha nabantwana bakho: Ixesha lomgangatho libalulekile kulwalamano lomzali nomntwana. Abantwana bafuna ixesha nengqalelo, ngaphandle kwezinye izinto eziphazamisayo. Dlala nabantwana bakho ngaphandle kokwazi ezinye izinto, nokuba yimizuzu embalwa suku ngalunye.
Uthando, umonde kunye novelwanoEzi zixabiso, ukongeza ekunikezeleni, ekufuneka libethelelwe ebantwaneni. Uvelwano lubavumela ukuba bazibeke ezihlangwini zabanye kwaye babaxhase ngakumbi. Umonde ubanceda baphathe ngcono iimeko ezinzima ezinokuvela imihla ngemihla. Uthando lusisiseko sokonwaba, uthando lwakho kunye nokuthanda kwakho yeyona nto inokwenza abantwana bakho bonwabe kakhulu, ungangxami ekuthandeni.
Fundisa abantwana bakho ukuba babe ngokwabo, bonwabele ubomi njengoko bebuthanda, ngaphandle kokucinga ukuba abanye bacinga ntoni. Ukuba nobuntu nokwazi ukuba ukwahluka kukodwa kuyabanceda ukuba bonwabe. Sebenza ngokwakho, fumana olona hlobo lwakho lubalaseleyo kwaye uya kukhulisa abona bantwana bonwabileyo emhlabeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Iingcebiso » Iingcebiso ezi-5 zokwenza abantwana bakho bonwabe